Huawei P40 Pro: Nyocha na ule nke ese foto | Gam akporosis
Huawei P40 Pro: Nyochaa Igwefoto na Ule
Ihe kwere nkwa bụ ụgwọ, izu gara aga anyị mere igbe na akpa echiche nke Huawei P40 Pro ọhụrụ, ọdụ ụgbọ elu nke ụlọ ọrụ Asia nke e gosipụtara n'ime nsogbu a niile nke akụkọ na-agbagwoju anya. Dị ka n'oge ọ bụla, anyị na-ebu unboxing na anyị na-etinye gị ebe a naanị otu izu gasịrị ka anyị wee nwalee ya n'ụzọ zuru ezu iji wetara gị echiche anyị kachasị mma. Anyị na-arụ ọrụ nwa oge na Huawei P40 Pro ọhụrụ ma anyị na-ewetara gị nyocha miri emi na ule igwefoto, chọpụta njirimara ya na anyị.
Dika anyi kwurula banyere oru oru na onu ogugu na mbu, ugbu a, anyị ga-elekwasị anya na ahụmịhe onye ọrụ anyị, naanị ihe ngwaọrụ ahụ mere ka anyị nwee mmetụta na ụbọchị ọ bụla.
1 Usoro curvy, dị egwu ma mara mma
2 Karịrị ike zuru ezu
3 Njikọta na-aga otu nzọụkwụ ọzọ
4 Multimedia ngalaba na obodo kwụụrụ
Usoro curvy, dị egwu ma mara mma
Huawei chọrọ inye P40 Pro ume nke ikuku ọhụrụ, nke ka na-enwe ọdịdị ụfọdụ na mpaghara gara aga, nke na-echetara anyị oge niile ebe o si abịa, mana agbanyeghị ihe ọ bụla nwere ike inwe ekele maka ahịa dị ugbu a. Anyị na-achọta ụzọ mbụ na-agagharị ugbu a na mpaghara elu, ihe na - enyere anyị aka iji ihu karịa, mana nke ahụ ga - emebi ihe omume ntụrụndụ nke ndị na - emezigharị na nseta ihuenyo na curvatures akpọrọ.
Maka akụkụ ya, ngwaọrụ ahụ enweela ibu ma e jiri ya tụnyere P3o Pro, mana imepụta ya na-eme ka ọ bụrụ ergonomic ma ọ bụrụ na ọ ga-ekwe omume. Tumadi anyị na-ahụ ọdịiche dị na sistemụ ọhụrụ maka igwefoto na nyocha ihu nke ihuenyo, nke ị nwere ike ịmasị ma ọ bụ obere, mana Huawei jisiri ike jikọta nke ọma na njirimara onye ọrụ yana ọkwa ya, ikekwe ụdị ndị ọzọ kwesịrị ịmụ otutu na nke a. O doro anya na Huawei P40 Pro a bụ ọnụ na-adị mma na aka ma dị mma, N'agbanyeghị ugboro ole na-eme na ọdụ ndị a, ha na-eji obi iru ala adọta mkpịsị aka.
Karịrị ike zuru ezu
Na ọkwa teknụzụ, anyị maara nke ọma nhazi ya site na ụdị ndị ọzọ gara aga nke otu ụlọ ọrụ ahụ, agbanyeghị, enwere obi abụọ, ebe ọ bụ na ugbu a, anyị ga-eme mkpebi mkpebi ihu na ọnụego ume ọhụrụ. Otú ọ dị, dị ka ọ dị na mbụ, P40 Pro dị n'ihu oge ya, anyị enwetabeghị nsogbu ọ bụla nke ojiji.
Nlereanya P40 Pro
Nhazi Kirin 990
Ihuenyo 6.58 inch OLED - 2640 x 1200 FullHD + na 90Hz
Igwefoto na-aga n'ihu 50MP RYYB + Ultra Wide Angle 40MP + 8MP 5x Telephoto + 3D ToF
Igwefoto n'ihu 32MP + IR
Ebe nchekwa RAM 8 GB
Nchekwa 256 GB gbasaa site na kaadị kaadi
Mkpisiaka agụ Ee - Na ihuenyo
Batrị 4.200 mAh na ngwa ngwa ngwa 40W USB-C - Reversible Qi na-akwụ ụgwọ 15W
Usoro njikwa A gam akporo 10 - EMUI 10.1
Njikọta na ndị ọzọ WiFi 6 - BT 5.0 - 5G - NFC - GPS
Ibu ibu 203 grams
Akụkụ X x 58.2 72.6 8.95 mm
Ahịa 999 €
Na nkenke, anyị enwebeghị ike ịchọta ngwa na-eguzogide Huawei P40 Pro a, anyị ejirila PUBG, Fortnite na egwuregwu ndị ọzọ gwuo mmiri, ma igodo na n'akụkụ ndị ọzọ, mapụtara ike na ọnụ a.
Njikọta na-aga otu nzọụkwụ ọzọ
Anyị nwere ọdịiche doro anya na nwanne ya nwoke gara aga na nke ahụ bụ na anyị nwere 5G usoro nkwukọrịta nke ụlọ ọrụ Asia. Nke a na-ekwe anyị nkwa karịa karịa inwe Njikọ 5G na ngwaọrụ anyị, ihe na-enweghị uru bara uru taa n'ihi na ụlọ ọrụ ole na ole na-enye njikọ 5G yana ọbụlagodi bụ ebe anyị nwere ike ịnweta ụdị ngwaahịa a. Otú ọ dị, anyị enweghị ike ichefu na anyị nwere NFC na nke kachasị mkpa, WiFi 6.
Njikọ WiFi a 6 Egosiputara ugboro ato ososo na njikota na adighi nma na ule anyi, anyi enwetala ihe di egwu ma e jiri ya tunyere ngwa ndi ozo anyi nwere n’oge a. N'akụkụ aka nke ọzọ, Ọ baghị uru ikwu, Huawei Share na Huawei Beam na-enye anyị nnukwu uru bara uru mgbe ọ na-abịa inwe ikuku njikọ gburugburu nke naanị ụlọ ọrụ dịka Apple nwere ike ịnye. O doro anya na n'agbanyeghị enweghị Jack 3,5mm, anyị nwere njikọta nwa oge n'ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ akụkụ niile na nke a bụ nkọwa iji banye na akaụntụ.
Multimedia ngalaba na obodo kwụụrụ
The panel ahụ toro a ntakịrị ma ugbu a, anyị nwere ntakịrị enwu elu karịa nke mbụ nke nwere uju agba juputara nke oma, ma anyi apughi ikwu na obu oke ihe di iche. N'ebe a na-ada ụda, anyị nwere ụkọ okwu nke igwe okwu dị elu n'azụ ihuenyo ahụ, yabụ na anyị nwere obere ụda stere na nke a na-achọpụta nke ọma mgbe anyị kpuchiri ọkà okwu na ala. Otú ọ dị, na ngalaba na ụda naste Huawei P40 Pro enwewokwa ọganihu na ọkwa olu na karịsịa na ọkwa nke ụda olu, Rịba ama ka mma.
Banyere nnwere onwe, 4.200 mAh nke na-anaghị ata ahụhụ n'agbanyeghị rMkpebi QHD + na 90Hz na-enye ume ọhụrụ nke na - eme ka ahụmịhe ahụ dị mfe, dakọtara na ike HDR dị elu yana nke kachasị mma. Anyị nwere 40W ngwa ngwa odori na ngbanwe ikuku ikuku. O doro anya na njikwa batrị nke EMUI 10.1 ka dị mma, anyị na-adị mfe karịa awa isii nke ihuenyo na anyị na-eche ihu njedebe dị elu na otu nke kachasị mma na ahịa.
Igwefoto nke Huawei P40 Pro a dị m ka nanị n'ụzọ zuru oke na ahịa ruo taa:
50MP f / 1.9 RYYB ihe mmetụta
8MP telephoto na mbugharị 5x
ToF 3D mmetụta
Nsonaazụ nke isi ihe mmetụta na ọnọdụ nkịtị dị oke, 50MP na ọdịiche zuru oke na ọfụma ọkachamara nke na-enye anyị ohere ịbawanye foto ma gaa n'ihu na-enweta ọtụtụ nkọwa. Otu ihe a na - eme na Ultra Wide Angle, nke karịrị ụdị nke gara aga na ozi ma na - aga n’ihu ịkwado ezigbo mma, n’agbanyeghi na ha bụkarị ihe mmetụta kachasị emetụta n’ihe ndị a.
Foto abalị ka bụ ebe Huawei na-emesi ike ma anyị enwetala nsonaazụ dị egwu n'ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọnọdụ niile, ọ bụ ezie na o doro anya na anyị tufuru nkọwa n'ụzọ anyị si eji Mbugharị, agbanyeghị, ọbụlagodi n'okwu ndị a ọ ka bụ ihe ijuanya.
N'aka nke ya, igwefoto selfie na-enye dika ihe eji achọ mma ma ọ bụ mgbe anyị gbanyụrụ ya, mana ọ nwere ike ijide ọtụtụ ozi na inye vidiyo dị oke mma. Banyere ndekọ vidiyo, anyị na-achọpụta na ọ na-enye anyị oge niile dị ka nhọrọ mbụ mgbe ịmepe ọrụ a (gịnị kpatara ya), Anyị nwere ndekọ 4K kwụsiri ike (otu n'ime ọganihu kacha mma nke Huawei) na ihe mmetụta niile ma o doro anya na anyị na-ahụ mkpọtụ ma ọ bụrụ na ìhè ahụ daa, Anyị na-akwado ka ị lelee vidiyo anyị iji lelee ya. N'ihe banyere ngwa ngwa, Huawei na-aga n'ihu na-eto n'obi ya, ee, ọ na-achọ ọtụtụ ọkụ iji nweta nsonaazụ ọma na ọnụego ya kachasị elu.
Ọ na-anọgide na-abụ ihe ịrịba ama nke ịdị mma na ịdị mma n'ichepụta ihe
Anyị nwere akụrụngwa kachasị ọhụrụ, ike, 5G na WiFi 6
Anyị nwere ihuenyo dị elu na igwefoto kachasị mma
A ga-ata ya ahụhụ site na enweghị GApps
Enweghị mmegharị nke ụfọdụ ngwa na nhazi ihuenyo ha dị ala
€999 a €1099
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Nyocha » Huawei P40 Pro: Nyochaa Igwefoto na Ule
[vidiyo] Esi gbanwee DNS na gam akporo maka Cloudfare ma ọ bụ ihe ọ bụla ịchọrọ